famehazan’ireo raiamandreny ny loza mananontanona ity nosy ity. Ireo firenena nitsiriritra antsika rehetra teo aloha aza tsy vitsy amin’izy ireny no lasa fitsiriritrantsika indray ankehitriny. Izany no tena tonga amin’ilay fitenena hoe verezin’ny tao afara. Hatramin’ny nosy Maorisy avy aza no mampirehareha antsika fa hamatsy vola ny fitondrana. Nireharehana anefa teo aloha fa tsy mila famatsiam-bola avy any ivelany ny fampandrosoana ary efa hatramin’ny tetezamita farany teo izany teny izany no nanakoako. Mbola sahin’ilay filoham-panjakana tamin’izany izay filoham-pirenena ankehitriny ihany no mamerina azy. Nasiany fanamarinana mihitsy aza moa hoe isika indray no hampindram-bola an’i Kaomoro atsy ho atsy. Asa moa io ao aoriana kely lazaina ion a rahoviana marina. Ho avy tsy ho ela toy ny tramway ve? Tonga dia maro no tsy misalasala mamaly hoe mbola ho lavitry ny afo ny kitay. Na tsy hiala lavitra antsika sy ireo nosy rahavavy fotsiny aza ny dinika dia efa toy ny tongom-bakivaky sady marary no maha menatra, hoy ny filazan’ny Ntaolon-drazantsika azy. Mba saika niray tantara sy naka filamatra antsika daholo ihany ireo raha iverenana ny zava-nisy tany aloha tany. Inona moa no nahatonga ilay anaran-tendrombohitra hoe “Mahafat” raha tsy ny teny Malagasy hoe “Mahafaty”? Ao amin’ny nosy rahavavy La Réunion anefa no misy an’izany toerana izany. Anarany isika mba isan’ireo tafala aloha indrindra tao anatin’ny vondrom-bola franc CFA izay natokana ho an’ireo zanatany frantsay aty afrika saingy moa ve izany nisy ozany taty amin’ny toekarentsika? Samy mahay mamaly izay fanontaniana izay daholo angamba! Mandeha ny fotoana ary maika ny fampandrosoana hoy ny filoham-pirenena. Tena marina io voalaza io. Isika rehetra, hono, no miara-manavotra an’i Madagasikara. Fanontaniana mipetraka anefa dia hoe afaka mandray anjara amin’ny fampadrosoana ve ny vahoaka raha toa ka tompon-trano mihono lava izao amin’ny fanapahan-kevitrao? Anjarany kosa amin’iny no miheritreritra.